Xukuumadda oo go'aan kasoo saartey dib u furida duulimaadyada gudaha
Shirkii maanta ay yeeshaan Wasiiradda Soomaaliya ayaa la horgeeyay qadiyadan, waxaana kasoo baxay go'aan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shir golaha wasiirradu maanta ay yeesheen oo uu guddoomiyay Ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Ra’iisul Wasaare ku-xigeen, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa lagu ogolaaday in dib loo furo duullimaadya gudaha si loo fududeeyo isu socodka Bulshada iyada oo lagu dhaqmayo talooyinka xakameynta faafitaanka COVID-19.
Sidda lagu sheegay war-saxaafadeed, shirka golaha ayaa, dhanka kale, lagu meel mariyay Heshiiska Gaadiidka Badda ee Soomaaliya iyo Qatar iyo Hindise-sharciyeedka Summadaha Ganacsiga.
Golaha waxuu sidoo kale ansixiyay is-afgarad ganacsi oo u Dhexeeya Soomaaliya iyo Suudaan, Is-Afgarad Ku Saabsan Samaynta Guddi Sare oo Isku Dhaf ah oo u Dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar, Is-Afgarad Ku Saabsan Machadka Diblomaasiyadda oo u Dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar iyo Is-Afgarad La Xiriira Wada-tashiga Siyaasadeed ee Qadiyadaha ay Wada Danaynayaan Labada Wadan ee Soomaaliya iyo Qatar.
Qadar ayaa xiriir dhow la leh dowladda madaxweyne Farmaajo oo la aaminsan yahay in ay dhaqaale ku bixisay doorashadii uu kusoo baxay ee qabsoontay bishii Febraayo ee sanadkii 2017-kii.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhowaan u socdaalay Qadar, halkaas oo uu kula kulmay mas'uuliyiin, isagoo la tilmaamay in uu kala hadlay xoojinta iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa horey dhowr jeer u sheegtay in ay dib u fureyso duulimaadyadda gudaha, balse ma aysan jirin dhaqan-qal dhinacaas ah. Lama ogga sababta dhabta ah ee ka dambeysa arrintaas, hase ahaatee, waxaa lagu macneeyay hubin lagu sameynayey xaalada Coronavirus ee dalka oo horey dartiis loo hakiyey duulimaadyada gudaha.
Mas'uuliyiin ayaa shaaca ka qaadey sababta dhabta ah ee ka dambeysa arrintaan.
Xukuno lagu riday Sagaal uu ku jiro ninkii Muqdisho ku dilay 180-ka qof
Soomaliya 31.12.2019. 16:34
Qaraxyadii ugu dhimashadda badnaa taariikhda ee ka dhacay Soomaaliya
Soomaliya 28.12.2019. 18:01
Khayre oo laga dalbaday inuu eryo wasiir katirsan xukuumadiisa
Soomaliya 21.12.2019. 18:12